Author Topic: အမောပြေဟာသမှတ်စု (Read 499900 times)
« Reply #560 on: August 14, 2011, 01:28:21 AM »
ဆရာဝန်။ ။ ဘယ့်နှယ့်လဲကျွန်တော်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း
'''ဟေးလူ ခင်ဗျားကိုကျုပ်မနေ့က ပြောတယ်လေ..အဲ့ဒီခြင်္သေ့ကိုတိရစ္ဆာန်ရုံသွားပို့ဖို့'''
''ဟုတ်ကဲ့ ပို့ခဲ့ပါတယ်.. ဒီနေ့တော့ရုပ်ရှင်ရုံလိုက်ပို့မယ်စိတ်ကူးမိလို့…''
Q : ဒါနဲ.ဲ့..နေပါအုန်း..နေပါအုန်း...
A : နေပါတယ်..
Q : မင်းကဘာလို. အရက်ကို အလွန်အကျွှံ သောက်ရတာလဲ...
A : သူရမေရာကံ ကျူးလွန်ပြီး...အခြားကံ ၄ ပါးလုံအောင်လို.ပါ...
Q : ဘာကွ! သူရာမေရကံ ကျူးလွန်ပြီး....အခြားကံ ၄ ပါးပါ ချိူးဖောက် တာ မဟုတ်ဘူးလား..
A : ဘဲနဲ. ချုိုးဖောက်ရမှာလဲ..
Q : ဗျာ..
A: အေ့..။ တကယ်သောက်ကြည်.ပါလား...အရက်မူးလွန်လို. သူများကိုလိမ်ဖို.မပြောနဲ.ကို.ရှာအလုံးကြီးကို
ုပြန်မကိုက်မိအောင်လို. မနဲ ထိန်းထားရတယ်....အေ့...။
Q : အေ့!
A : မအေ့နဲ. တချို.ဆို အမူးလွန်းပြီး အမှန်တိုင် ပြောမိလို. ကျွှဲခိုးပေါ်တာ ရှိသေး..အေ့။
Q : အဲ့!
A : မ အဲ့ နဲ. အုန်းရှိသေးတယ်..သူတပါးပိုက်ဆံခိုးဖို.မပြောနဲ.
ကိုယ့်အိတ်ထဲ ပိုက်ဆံတောင် ဘယ်ကောင် နှိက်သွားမှန်း မသိလို.
Q : ဟင်!
A : မဟင်နဲ.အုန်း..ကျန်သေးတယ်...သူတပါးအသက်သက်ဖို.မပြောနဲ.
ကိုယ်ဘာသာကို မရပ်နိုင်လို. ဓာတ်တိုင် ဖတ်ထားရတာဘဲ ကြည်. တော့...အေ့..။
Q : သြော်!
A : မသြော်နဲ.မပြီးသေးဘူးသူများသားမယားကိုပြစ်မှားဖို.ဆိုဝေးရော...
နိုင်ငံခြားမှာ ဖြစ်ဖူးတယ်...အမူးလွန်ပြီး ပန်ခြံထဲမှာ အိပ်နေတာ ကိုယ်. ဖင်ထဲကို
Q : မင်ပြောတော့လည်း ဟုတ်သလိုဘဲ......ငါလည်း ကံ၎ပါး လုံအောင် အရက်သောက်ရ
မလိုဖြစ်နေပြီ အရက်ဆိုင် သွားအုံးမှ.....။
« Last Edit: August 27, 2011, 09:44:10 AM by tunaye2011 »
« Reply #561 on: August 14, 2011, 01:37:41 AM »
" ဪ ..... အဲဒါကျောက်တုံးလေးတွေလား၊ ကျွန်တော်ကသောက်ရမယ့်ဆေးမှတ်လို့
" ဟောတော် ဒုက္ခပါပဲ။ အဲဒါရှင်သတိရလာရင် ပြဖို့ထားတာ။ ရှင့်ဆီးအိမ်ထဲက
ခွဲထုတ်ထားတဲ့ဟာတွေရှင့် " @hp
ပြီးတော့ညအမှောင်ထဲ ကားရှေ့မီးကို ဖွင့်မမောင်းဘူး ။ လမ်းလည်းမှားလာတယ် ။
" ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ကျွန်တော့်မှာအပြစ်တစ်ခုပဲ ရှိပါတယ် ။
အဲဒါကတော့ဒီကားကို ခိုးလာတာပါပဲ " @hp
ပြောင်းသွားတာတစ်ပတ်လောက်ပဲရှိသေးတယ် မြေးရဲ့ " @hp
" အသုံးပြုပုံမှားလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ၊ ကျွန်တော်တို့ရောင်းတဲ့
ယပ်တောင်ရှေ့မှာ ဟိုဖက်ဒီဖက် ခပ်မြန်မြန်လှည့်ပေးရပါတယ်ခင်ဗျား " @hp
သေသေချာချာမြင်ပါတယ်လို့ ထွက်ဆိုနေပါတယ် " @hp
မေမေ့တာဝန်ထားလိုက်စမ်းပါ " @hp
" ကျွန်မနားကိုအသာကပ်ပြီး လက်ကုတ်ခေါ်သွားတုန်းက ဒီလိုလုပ်လိမ့်မယ်
မထင်ခဲ့မိလို့ပါရှင် " @hp
ပြင်ပအစားအစာတွေ လုံးဝကျွေးခွင့် မရှိတာကို သူမသိလို့ထင်တယ် " @hp
ခင်ဗျားကရေပတ်မ၀င်အောင် ပြောနေတာကိုးဗျ " @hp
" ဟောဟိုထိုင်နေတဲ့လူဟာ ခုနကတစ်ချိန်လုံးလိုလို ကျွန်မကိုစိုက်ကြည့်နေတာ
ဒါပေမဲ့ မျက်မှန်ကသစ်ကိုင်းနဲ့ငြိပြီး ကျပျောက်သွားလို့ " @hp
" ခင်ဗျားတို့ ထမင်းဆိုင်က ကြက်သားဟင်းပန်းကန်ကို ကြည့်ပါဦး ၊
« Reply #562 on: August 14, 2011, 02:16:12 PM »
တနေ့မှာတော့ သူမက သုဘရာဇာဆီမှာအခေါင်းသွားအပ်ပါ
ဒါကြောင့်ကျမသေတဲ့အခါ အားလုံးသိအောင် အခေါင်းဘေးမှာ အပျိုစင်ဖြစ်ကြောင်း ရေးပေးပါ"လို့ပြောပြီး အခေါင်းအပ်သွားခဲ့ပါတယ်။
« Reply #563 on: August 14, 2011, 02:19:07 PM »
ဟူသော လေယာဉ်မယ်ဧ။် ရေဒီယိုမှတစ်ဆင့် မေးမြန်းသံကို ခရီးသည်များ
ကြားကြရသည်။ လူရွယ်တစ်ဦးသည် မိမိဧ။်ထိုင်ခုံမှထကာ ပိုင်းလော့ဧ။်အခန်း
ထဲသို့ ၀င်သွားသည်။ မကြာမီ ဆရာဝန်လူရွယ်ဧ။် ကြေငြာချက်ကို
ချူချာတစ်ယောက် taxi စီးလာသည်။ လိုရာခရီးသို့ရောက်သောအခါ
မိမိဧ။် တပည့်ဖြစ်သူကို ဖဲဝိုင်းတွင်ဖဲကစားနေသူကို ဆရာမက
တပည့်ဧ။် နားရွက်ကို ဆွဲလိမ်လိုက်သည်။
"ပြန်မလာဘူး။ဟုတ်လား။ သူ့နောက်ကိုသာ မလိုက်ခဲ့ရင် ကျုပ်တောင်
အိမ်ပြန်ရောက်မှာ မဟုတ်ဘူး၊ပြန်လမ်းကိုကျုပ် မမှတ်မိဘူးလေ"
« Reply #564 on: August 14, 2011, 02:21:19 PM »
ိတ္တဇ ဆေးရုံတစ်ခုဟာ အလွန်ဆိုးတဲ့လူနာတွေကိုအခြားဆေးရုံ ပြောင်းဖို့ လေယာဉ်နဲ့ ခေါ်ဆောင်လာ ပါတယ်။ ဆရာဝန်ကတော့ လေယာဉ်မှုးဘေးမှာ ထိုင်နေပြီး လူနာတွေကိုတော့ လေယာဉ်နောက်ခန်းထဲမှာ ထားပြီးခေါ်လာခဲ့ကြတာပေါ့။ အဲဒီချိန်မှာ လေယာဉ်ထဲ ကနေ အသံတွေကို ဆူညံနေအောင်ကြားရပါတယ်။ ဆရာဝန်လည်း စိတ်ပူပြီး အရူးခေါင်းဆောင်ကို ဘဲလ် နှိပ်ပြီးလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။
« Reply #565 on: August 14, 2011, 02:24:12 PM »
« Reply #566 on: August 14, 2011, 02:26:29 PM »
« Reply #567 on: August 14, 2011, 02:28:03 PM »
ပင်လယ်ကမ်းခြေတွင် ယောင်္ကျား လေး တစ်ယောက် ကိုယ်တုံးလုံး ဖြင်. နေပူစာ လှုံ နေစဉ် သူ.ဆီကောင်မလေး တစ်ယောက် ဦးတည်၍ လျှောက်လာပါတယ်။
ဒါနဲ. သူကလဲ ရှက်တာနဲ. သူ.ပစ္စည်း ကို သူဖတ်နေတဲ. သတင်းစာ နဲ.အုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။
ကောင်မလေး - ရှင်.သတင်းစာ အောက်မှာ ဘာရှိလဲဟင်။
ကောင်လေး - ငှက်တကောင်ရှိတယ်။
ရဲ - မင်းဘာဖြစ်လာတာလဲ။
ကောင်လေး - မသိဘူး၊ ကျွန်တော် ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာ လဲလျှောင်းနေတုန်း ကောင်မလေး တယောက် က ကျွန်တော. ပစ္စည်းအကြောင်းလာမေးတယ်။ အဲ.နောက်မမှတ်မိတော.ဘူး။
ရဲ - နင် ဟို ကိုယ်တုံးလုံးနဲ.ကောင်လေး ကို ဘာလုပ်လိုက်တာလဲ။
ကောင်မလေး - အော်သူ.ကိုလား။ ဘာမလုပ်ပါဘူး။ ကျွန်မ က ငှက်ကလေးနဲ.ဆော.နေတုန်း ငှက်က ကျွန်မကို တံတွေးနဲ. ထွေးတယ်လေ။ ဒါနဲ.ကျွန်မလဲ စိတ်တိုပြီး ငှက်ရဲ.လည်ပင်းကို ချိုးပစ်တယ်၊ ငှက်ဥ ကို ခွဲပစ်လိုက်ပြီး အသိုက်ကိုပါ မီးရိူ. ပစ်လိုက်တယ်။
« Reply #568 on: August 14, 2011, 02:30:28 PM »
တစ်ခါက စင်ကပူနိုင်ငံတွင် နေထိုင်သော ကိုကုဒ်ဒါနှင့် ကိုဘောလုံးတို့ နှစ်ဦး ညနေပိုင်းတစ်ခုတွင် ဂေါက်သီးအတူကစားနေကြစဉ်ဖြစ်သည်။
ညနေပိုင်း ကျောင်းဆင်းချိန် ဖြစ်သဖြင့် ကျောင်းမှ ပြန်လာသော သားအမိနှစ်ဦးက သူတို့ နှစ်ဦးအား အဝေးမှ တွေ့ မြင်သွားရင်း အမေဖြစ်သူက သားဖြစ်သူကို ပြောသည်။
မိခင် ။ ။ ``သား ဟိုမှာကြည့်လိုက်စမ်း''
သား ။ ။ ``ဗျာ ဟိုလူကြီးနှစ်ယောက်လား မေမေ''
မိခင် ။ ။ ``အင်း ဟုတ်တယ် သား ၊ သူတို့ ကိုသေချာကြည့် ၊ နေပူပူကြီးထဲမှာ အလုံးလေးတစ်လုံးကို ဒုတ်တစ်ချောင်းနဲ့လိုက်ရိုက်နေရတာ ဘယ်လောက် ပင်ပန်းလည်း သားစဉ်းကြည့်ပေါ့ သားရယ် ၊ စာသေချာ ကြိုးစားရမယ်နော် သား'' တဲ့ :hapy
« Reply #569 on: August 14, 2011, 02:33:26 PM »
အိမ်သာသန့်ရှင်းရေးလုပ်သားနေရာသာ လစ်လပ်နေသည်ဖြစ်သဖြင့် လုပ်လိုက လုပ်နိုင်ကြောင်းလူငယ်အား ပြောသည်။
လူငယ်က သဘောတူလိုက်ပြီး အလုပ်လုပ်ရင်း သီချင်းနားထောင်နိုင်ရန် အိမ်သာထဲတွင် ကက်ဆက်တစ်ခုထည့်ထားလိုက်သည်။ လူငယ်ပထမဆုံးအလုပ်စဆင်းသည့်နေ့ဖြစ်သည်။၀န်ကြီးရုံးသို့ ၀န်ကြီးတစ်ဦးရောက်လာပြီး အိမ်သာဘယ်မှာလဲဟု လူငယ်အားမေးရာ လူငယ်က ၀န်ကြီးကို အိမ်သာသို့ လိုက်ပို့ပေးသည်။
မြန်မာပြည်သိန်းတန်၏ “ရိုင်းတဲ့စင်ယော်´´သီချင်းသံ ငြိမ့်ညောင်းစွာ ပေါ်ထွက်လာသည်။ မကြာမီ အိမ်သာခန်းထဲမှ စောစောက၀န်ကြီးထွက်လာသည်။
“မောင်ရင် ဒီမှာ အလုပ်လုပ်နေတာ ကြာပလား´´“ဒီနေ့ ပထမနေ့ပါခင်ဗျ´´ “အေး မင်းကိုရာထူးတိုးပေးရမယ်´´
အိမ်သာခန်းထဲ အရာရှိကြီးရှိနေစဉ် တွံတေးသိန်းတံ၏ “အသီးတစ်ရာ အညှာတစ်ခု´´ သီချင်းကိုဖွင့်ပေးလိုက်သည်။ ထိုအရာရှိလဲ စိတ်ကျေနပ်မှုရကာရာထူးတိုးအောင် ထောက်ခံပေးမည်ဟု လူငယ်ကို ကတိပြုသွားသည်။
“ဒီအနားမှာ အိမ်သာရှိသလားဟေ့´´ လူငယ်ကခေါင်းဆောင်ကြီးကို လိုက်ပို့သည်၊ ထို့နောက် “နိုင်ငံတော်သီချင်း´´(ကမ္ဘာမကြေ) သီချင်းကိုဖွင့်ပေးလိုက်သည်။